Yaa iga caawin kara ka Adata Flash Drive soo ceshano Data?
Hi, Waxaan leeyahay Adata ah c802 USB flash 8GB drive, dhibaatada bilowday markii ay ka saareen files si ay ugu sareysa miiska. Intii lagu guda jiray ka saarida, kombiyuutarka demiyo in lama filaan ah. Markii aan kombiyuutarka reboot, waxaan ogaaday in waxyaabaha ku jira oo dhan aan laga saaray si aan ugu sareeya miiska, laakiin flash waa madhnaa. In ka badan nus ka mid ah files dadkaygii waxaa loo. Fadlan soo jeedin hab ii soo ceshano xogta ka Adata flash drive. Best xiriira.
Xaaladdan oo kale, waxaan idiin xaqiijin doonaa in aad sida macquulka ah soo kaban karto, xogta laga Adata flash drive. Halkan ayaan u Khushuucdo Dartiis soo jeedin Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac aad u. Barnaamijkan waa qalab waxtar leh in ay dib u soo ceshano xogta ka Adata flash drive, iyadoo aan loo eegayn xogta uu lumo sababta oo ah baadi nidaamka, ka saarida aan habboonayn, ama tirtirka shil ah. Waa awood u kabsaday xogta sida waraaqaha, sawiro, Cajalado, videos, archives, iwm sokow, haddii aad bixisaa version maxkamad si aad u iskaan flash USB Adata ah drive ka hor wax iibsiga ee soo kabashada ah.
Qabtaan Adata Flash Drive Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: Ka hor inta aan dib u soo kabashada, si loo hubiyo in aad Adata flash drive in si wanaagsan loo xiran karo kombiyuutarka.
Tallaabada 1 Dooro Mode Recovery ah
Marka bilaabay Wondershare Data Recovery, interface barnaamijka muujin doonaa 3 hababka soo kabashada iyo "furmaya Recovery" doorasho. Saddexda hababka soo kabashada yihiin "lumay Recovery File", "Recovery ah Barzakh," iyo "ceeriin Recovery".
Sida caadiga ah waxaad isku dayi kartaa "lumay Recovery File" mode hore. Haddii hab taasi ma caawin, aad awoodo kale laba hababka markaas.
Fiiro gaar ah: Tilmaan-bixiyahan waxa ku salaysan yahay in Windows version of barnaamijka Wondershare Data Recovery. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, waxaad kala socon kartaa waxbarashada la mid ah la version Mac.
Tallaabada 2 baarista USB Adata Flash Drive
Talaabadan waa mid fudud ilaa xad. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan drive ay ku adag tahay in aad USB flash Adata drive oo guji "bilow" si ay u bilaabaan baaritaan ah.
Tallaabada 3 Ladnaansho Xogta laga Adata Flash Drive
Ayaa laga helay files la tusay doonaa qaybaha ama waddooyinkeeda ka dib markii raajo-ka. Waxaad ku hubin kartaa in faylasha aad rabto in aad soo kabsadaan ayaa laga helay ama aan la magacyadooda asalka ah.
Markaas kaliya aad u baahan tahay si ay u xusaan kuwii faylasha aad doonaysid in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer. Fadlan ha badbaadiyo files soo kabsaday si aad Adata USB flash drive ka dib markii dib u soo kabashada, si looga fogaado overwriting xogta.
> Resource > Flash Drive > Adata Flash Drive Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Adata Flash Drive